Manje, kukhona lenqwaba ubuchwepheshe evumela ngokushesha futhi enokwethenjelwa ukuxhuma izintambo kagesi kanye amakhebuli. Ngamunye izindlela has kokubili pluses kanye minuses. Izintambo futhi izintambo axhunyiwe ngu Welding noma nokunamathisela ngomthofu. Kungasetshenziswa ukubophela babashayeli noma kuhlanekezela emabhuloki esibulalayo, SIZami. Zonke lezi zindlela zinhle futhi ngempumelelo. Kodwa uma ufuna ukuthola ngempela uxhumano eliphezulu, crimping usizo izizathu.
Waba yini umphumela walesi ndlela - oxhumana ezinhle uvikelekile namachibi futhi uxhumano namandla ngokukhethekile. Okuwukuphela negative - non-detachable. Nqamula izintambo ezimbili: Kawusoze waphuma. babe kuphela ukuba ahlukaniswe. Crimping izintambo wenziwa usebenzisa ithiphu ekhethekile - liner. Abakwazi ithengwe ngasiphi esitolo hardware noma emakethe. Izindleko yalezi zinto - cishe u- $ 1 per unit.
Basuke usufakwa emthanjeni. A emikhonweni uqobo bese usebenzisa cindezela isandla sikhubazekile, futhi ngaleyo ndlela kwakha ezinhle uxhumano kagesi.
Kungani ingcindezi ukuhlolwa - ukuthi okunokwethenjelwa?
Compound wire crimping - indlela uxhumano Ubuningi bamahora eqinile. ukuthembeka okunjalo ngeke likwazi ukunikeza iyiphi inketho okunamathiselwe ekhona. Ukuze bathole eliphezulu kwakwakhe eyanele contact endaweni nokuzinza Kumele kucinisekiswe. Okudumile e amakhosi yasekhaya stranding babashayeli ezimbili akukuniki eyodwa noma enye. Ukusonta babashayeli avame oxidized (ngisho naphambi yemigoqo ethile eminyangweni kahulumeni). Futhi ngeke kuthinte kahle loxhumana kagesi. Ukusetshenziswa izibopho nangokuvikela noma PPE kusiza ukuthuthukisa izici ezithile wamandla twist elula.
Nokho, i isiqinisekiso eliphelele ukuthembeka uxhumano ezifana lapha noma. Terminals - ikhambi enhle, kodwa endabeni butho elikhulu, ingafaneleki wamanje. contact ezinhle zingenza lukhulu ashaya nge brazing. Lapha namandla, contact kakhulu. Kodwa kukhona nemibi kwakwakhe ezinjalo. I solder kungaba evuthayo uma babashayeli sidlula wamanje elikhulu. Futhi, solder wire akuyona njalo elula futhi evikelekile.
contact Ideal ingatholakala Welding. Nokho, amathuluzi ukwakha ukuxhumana eqolo awabelwene ngokulinganayo. Futhi sebenza lezi amadivaysi kudinga amakhono athile. Wire crimping ihlinzeka contact ephelele kagesi, njengoba kwakwakhe ngokwalo kuyoba enokwethenjelwa kakhulu ngombono amandla. Phula iziqobosho enjalo nzima kakhulu.
Ubuchwepheshe kuhilela ezimbili ongakhetha crimping. Lena indlela le indentation zendawo kokucindezelwa okuqhubekayo. Ukuze usebenze zethusi esetshenziswa noma aluminium wire. Liner Kufanele kwenziwe lezi zinhlobo zezindwangu. Kusese izakhi ingxubevange zethusi-aluminium.
Kusukela nge-aluminium eyebiwe bavame ivele namachibi yabo amafilimu, emkhonweni kufanele pre-ukusikiwa futhi ziphathwe zokugcoba ekhethekile. wire yethusi nakho oyi-ngayo. Ukusebenzisa inqubo zokugcoba kunciphisa ingozi umonakalo kungenzeka ngemithambo. Futhi, amandla ngomshikisho kuyehla kakhulu. Crimping wenziwa ithuluzi ibhukwana noma wokubacindezela. Kulo mBhalo - ezimise cindezela. Ngokuvamile isisetshenziswa izimboni ezinkulu.
Isebenza kanjani? I emaceleni omabili ikhebula is crimped ngaphambi round isimo sabo. Ngaphezu kwalokho core ufakwa emikhonweni lize lithi khimilili. Kungenzeka ukuxhuma ngempela Butt. Kodwa kulokhu, akubona bonke bukhoma kwesigaba idlula spigot. Endabeni kokucindezelwa endawo ithrekhi incike we imigodi ukujula. Lesi sakamuva singabangela kungalinganiswa nge caliper. Uma usebenzisa kokucindezelwa okuqinile, bese uhlole-Sectional ndawo. Khona-ke, lapho crimping izintambo kuphumelela, kubalulekile ukucubungula olwelwesini tape noma lokotkanyu. Ngokulandelayo, ucingo kanye cable ngobunono ibekwa ezininginingi.
Ukuze uxhume sezintambo noma imicu ikhebula ngakho uzodinga ithuluzi ekhethekile. Lokhu mechanical nezizenze ngokucindezela. Bona ukuvumela ngempela uvalwe aboshezelwa ekupheleni emikhonweni phezu ubude balo lonke.
ithuluzi esandleni licindezele kwesigaba ithiphu okuyinto esingaphansi 120 mm 2. emikhonweni Okukhulu onomfutho usebenzisa ithuluzi wokubacindezela. Uma umsebenzi ukwenza ukuxhumana eziningana izintambo ikhebula letingemasayizi lahlukene, khona-ke kungcono ukusebenzisa ithuluzi crimping izintambo lomunye hlobo. Lezi impintshisi anemisila punches nezilandiso ingafi ngoba izigaba ezahlukene esiphambanweni.
Sleeves kwentambo crimp nezinhlobonhlobo zazo
Ukuze uthole uxhumano ephelele, kumelwe ukhethe wesokudla noma ithiphu. I lobuchwepheshe iphepha emikhonweni ngoba crimping izintambo babe namagama athile. Ngakho, kukhona ngala macebiso alandelayo:
GM futhi GML
Brass izingxenye asetshenziselwa luyingxenye izintambo zethusi babashayeli. Basuke lahlukaniswa izinhlobo - GM futhi GML. Okokuqala - lokhu liyithusi abavamile yokuxhuma emkhonweni. Basuke abavikelwe, ukungabi ezinengilazi zokuzivikela, hhayi ngaphambili ngayo. Ingaphandle libukeka lutho ngaphezu njengenhlangano tube abavamile. GML - ubuye emikhonweni zethusi, kodwa esemathinini.
Ingaphezulu le ithiphu is camera nge ungqimba ekhethekile tin-bismuth ingxubevange. Lesi sendlalelo zokuzivikela kuvimbela namachibi futhi ukugqwala izinqubo. Ithusi oxidizes ngokushesha, futhi ingxubevange zokuzivikela ugwema lokhu. Ngemva uxhumano usebenzisa GML zethusi izintambo awangeni ukusabela namachibi. Abanye ochwepheshe sebenzisa esemathinini emikhonweni zethusi sezintambo ka ukubumba aluminium babashayeli. Ngokwe-makhosi, ungqimba tin kuvimbela ukuxhumana ngqo phakathi umqhubi kanye emkhonweni zethusi. Kodwa akukho Kunconywa. Phakathi ukusonteka i- ubuqotho ungqimba avikelayo, futhi ukugqwala - it is kuphela Kuxhomeke isikhathi.
Imibhalo lobuchwepheshe zibizwa ngokuthi "HA" futhi kuphela ezifanelekela ukusetshenziswa ne-aluminium. Ungayisebenzisi kubo sezintambo wenza ezinye izinto.
Lokhu lugs aluminium-ngethusi. Basuke ekhonjwe amapheji GAM.
Ngosizo lwabo eyenziwa crimping izintambo zethusi Butt aluminium. Lezi amadivayisi ekahle Kulezo zimo lapho kudingeka ukwakha ikhebula esisha wiring ubudala. Ngakolunye uhlangothi ku igobolondo ufakwa emayini yethusi, ngakolunye - aluminium. Izingxenye ezimbili igobolondo kuthiwa oxhumene by ngomshikisho Welding.
It isehlane ezikhumulweni kwentambo crimp. Lokhu sleeve ithiphu ezivamile nge ingxubevange ithini. Top ingxenye embozwe ukwahlukanisa wenza PVC. Esebenzisa leli thuluzi ngokuphelele oxhumene multi-core izintambo nge izingxenye zethusi. GSI muhle futhi kulula ukuyisebenzisa - asikho isidingo ukususa ngabodwa yakhe ngaphambi inqubo.
Ubukhulu lugs, tesakhiwo
Okuncane cross-section etholakalayo GML - 1.5 mm 2. Ngaphezu kwalokho Ubukhulu sikhule - 2, 4, 6, 10 mm 2 noma ngaphezulu. Kusukela lezi zimiso, kungashiwo ukuthi ingxenye sleeves yilezo ekhona izintambo futhi izintambo. Wokufunda ichopho notation pretty elula. Ngokwesibonelo, GDF-6 - kuyinto ithiphu ithusi, esemathinini. Isiphambano-sigaba 6 mm 2. Endabeni kuhlanganiswe emikhonweni kophawu kubonisa osayizi ezimbili - i-aluminiyamu wire ithusi. Ngokwesibonelo, MHA 16/10 - 16 aluminium futhi 10 - I-ngethusi.
Ngu ukwakhiwa, emkhonweni kungenzeka ngepayipi eziyize noma septum. Lesi sakamuva asisebenzi uma ngocingo elandelayo crimping ferrules Butt. Lezi ngodonga kukhona phakathi emkhonweni. Ngosizo lwabo, ungalungisa ukujula ikhebula umzila. Uma kubalulekile ukwandisa, imikhawulo kokubili ichopho izomashela nobude efanayo.
Amaphutha wokusebenza crimping
Ngokuvamile Wabasaqalayo ochwepheshe ukusebenza ne ngogesi ungenza amaphutha. Ikakhulukazi labaninizo ukwenza ikhaya ukulungiswa indlu noma ifulethi. Cabanga ejwayelekile iningi labo, ukuthi avunyelwe kule nqubo uxhumano nge crimping. I cross-ingxenye emkhonweni lincane wire. Akusoze uma yokuxhuma akufanele uzame ukwehlisa ikhebuli ulungise ngaphansi ubukhulu ithiphu.
Lokhu kungaholela ukwanda ukumelana kagesi nokwehlisa-bandwidth. Ezindaweni compounds olunjalo belungaphelelwa isikhathi wahlala kushisa kakhulu, futhi ekugcineni ukuwohloka. Eyesibili ethandwa iphutha - emikhonweni, okuyinto ezinkudlwana ububanzi kubantu kunokuba kufanele. Kulokhu, ngeke bakwazi ukuthola amandla adingekayo mechanical emalungeni. Ngisho eguqa wire izikhathi eziningana, ukuxhumana okuhle namanje engakutholi ke.
Lapho crimping izintambo zethusi noma yimuphi omunye imikhono ngaphansi kusilela, abaningi ozama usike ichopho ibe izingxenye eziningana. Lokhu kungenxa ukonga imali. Kodwa isenzo esinjalo ngeke kuholele ukumelana lenyuka nokushisa. Njengoba wire crimped kubi. Egcekeni ithuluzi ezifanelekayo. Ungazami ukwenza umsebenzi kanye crimping crimp izando, impintshisi, noma imuphi omunye ithuluzi. Isici ngeke athathe ukuma oyifunayo futhi unamathisele izintambo. Ngakho ungakwazi ubuhlungu emkhonweni futhi ikhebula le.
Crimping - kuyindlela okuthembekile ukuxhuma izintambo ezimbili noma imicu bese contact ezinhle. Kodwa kuphela kudingeka sebenzisa senzelwe kule divayisi. Ngenxa yalokho, uthola eliphezulu uxhumano unomphela, okuyinto ngeke oxidize.
Gusinoozerskaya - enye yezindawo ezinkulu kakhulu kule Trans-iBaikal esifundeni
Izinkomba zokukhiqiza kahle kakhulu ekuthuthukeni onobuhle ezintsha yentuthuko
Ukulandelela iphepha - Umlando
Kuvuna ukuze zisetshenziswe esikhathini esizayo: Jam ka Rowan ne apula
Izidakamizwa "prednisone" futhi "prednisolone": umehluko, yokusetshenziswa